PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - Uma usevisa imoto usuke uyinika impilo ende
Uma usevisa imoto usuke uyinika impilo ende
Isolezwe - 2017-09-15 - EZEZIMOTO -
NGIYAMEMEZA ngiyinkunz’yombhemu ngiyakhuleka kinina nonke bathandi bokudumayo nabafundi bale ngosi.
Ngithi sonke asishaye kancane njengoMoses kwezingcwele sihlokoloze ama hazard ethu sicinge indawo ephephile bese siyikhwebulela eceleni imakwabo, ukuze siphinde sincinde sonke kulolu dengezi oluthakwe ngezinyamazane zomgwaqo kwelakho lodumo lokuwela umfula ugcwele.
Ngesonto eledlule sivule injini yemoto kodwa angikhumbuli siwuvala ubhonethi wethu. Ngakho sengithi masiqinise amabhawodi, sigcobe amafutha sesule ukungcola laphaya nalaphaya. Empeleni ngikhuluma ngokusevisa imoto.
Iningi lezimoto zilindeleke ukuthi zinakekelwe zilolongwe njalo emva kwamakhilomitha aphakathi kuka-15 000 no-20 000. Uma usevisa imoto kunezinto okufanele uzazi ukuthi zishintshwa nini.
Kulezi zinsuku ngike ngahlangana nomunye umlandeli wale ngosi wangibuza ukuthi yini ebalulekile ukuthi ayishintshe uma kuwukuthi usevisa imoto kodwa amandla akanawo ngokugcwele.
Lo mbuzo ube yinkinga kimina kodwa ngibe sengimchazela ukuthi phakathi kwezinto eziyingozi uma ungazishintshi, kuba amafutha enjini. Into eyenza ngisho njalo wukuthi uma amafutha esehlale isikhathi eside engashintshwa agcina eseshubile okwenza ukuthi i-oil pump yehluleke ukuwamunca iwadlulisele ezindaweni ezidinga amafutha ukuze zisebenze kahle.
Ngiyafisa ukuthi kucace ukuthi namanzi ayingozi uma engasashintshwanga isikhathi eside.
Ake ngikuchazele ukuthi amafutha enjini enzani emotweni. Amafutha awapheli ikakhulukazi uma imoto isaphilile engavuzi ndawo ngokunjalo nama oil ring, valve seal kusaphile saka.
Amafutha alinda ezansi endishini okuthiwa wusump, yilapho i-oil pump iwalanda khona ngombhobho onesisefo maqede iwathumele emathunjini enjini ahambe ngemithambo emincane aze ayodundubala phezuku ku cylinder head. Lapho-ke afike athambise avikele ukudlana kwensimbi ku-cam shaft kulezo zimoto ezino cam shaft phezulu. Aphinde adale ukushelela ngokuthi agcobise nama-tappet. Athi uma eseqedile ukugcobisa phezulu ehle ngeminye imithambo esebuyela phansi ku sump adlule agcobise zonke izindawo ezinensimbi enyakazayo aze ayozika phansi.
Ngokunjalo naku-crank shaft ayagcobisa eqhamuka ngezimbotshana eziphumela phezu kwama bearing angama big end nama-main asengalweni ye-piston esiyibiza nge conrod lapho ixhawulana khona no crank shaft.
Nawo belu ucrank shaft unezimbotshana angena kuzo athi uma eseqedile ukugcobisa ama-bearing ehlele kubheseni u-sump. Lo bheseni osasisu senjini unebhawodi elisasibhono esivala umbhotshoselwa okubizwa nge oil plug usebenza ukuthi uma ukhipha amafutha uqaqe lona leli bhawodi elivala umbhotshoselwa.
Ngakho-ke uma amafutha eseshube kakhulu esephenduke ubikiza lodaka, i-oil pump iyehluleka ukuwamoma. Lokho bese kudala ukoma kwensimbi bese iyaqala iyadlana. Ithi uma isidlene bese yehluleka ukuqhubeka nokuphenduka kube ukufa kwayo njalo.
Lesi simo siyenzeka noma i-oil pump ivele yafa noma kwavimbanisa into esahlule esisefweni se-oil pump esivikela ukungena kwezinto eziyiyizigaxa emithanjeni egijima amafutha. Uye uzwe kuthiwa imoto isishaye injini lapho ishunqe noma ikhale umsindo okoqozayo.
Yingakho-ke kubalulekile ukuthi amafutha ashintshwe njalo emva kwesikhashana noma ngabe imoto ibingahambi kufanele ashintshwe amafutha ngoba njengoba ehleli phakathi enjinini abuye aphelelwe yisikhathi. Okunye okuhambisana namafutha enjini yi oil filter, isifonyo esicwenga izibi okungenzeka ukuthi zingene ngephutha zathola indawo yokucusha esisefweni se-oil pump nokuzama ukuhluza amafutha asuke aseqala ukushuba.
Yingakho kubalulekile ukuyishintsha ne-oil filter ngoba iyihluzo eligugayo futhike inento esaphepha phakathi okusho ukuthi emuva kwesikhathi liyaguga iphepha.
Namanzi enjini ayadinga ukuthi ashintshwe ngoba umuthi afakwa wona uyaphupha nawo emva kwesikhathi.
Ngakho uma usevisa imoto yakho washintshe namanzi. Amanzi asuka ku radiator adlule ku thermostat efuqwa yi-water pump maqede ayongena ngemithambo yawo wodwa enjinini. Amanzi awahlangani namafutha kodwa agijima kuyoyonke injini ikakhulukazi esiqukaqukeni esisibiza nge block aze ayoshaya okhakhayini lwenjini ku-cylinder head maqede abuyele esigujini sawo ku-radiator.
Nawo ayazungeza awabuyi ngendlela aphume ngayo ku-radiator. Uzokhumbulake ukuthi uma insimbi uyicwilisa emanzini iyathomba, yingakho-ke kuye kube nomuthi ofakwayo ukuvikela ukuthomba kwezinsimbi okudlula kuzo amanzi.
Uma imoto seyime isikhathi eside esiyiyizinyanga eziningi, kubalulekile ukuyishintsha amanzi ngaphambi kokuqala ukuyisebenzisa. Uma amanzi eshintshwa uyahlanzwa u-radiator ukuze kungabi khona ukungcola okusalayo okungadala ukudleka kwensimbi.
Sonke siyazi ukuthi uma injini incishwe amanzi ishisa ungcwecwe obizwa nge-head gasket ngenxa yokushisa okwedlulele nokuthi iyafa i-cylinder head sigobe noma sichachambe.
Okunye okubalulekile wukuthi kushintshwe ama-tensioner, isonjwana eliqinisa itiming belt kwezinye izimoto njenge Toyota Y Series akubi yisondo kodwa kuba yinsinjana encane enekhanda elisa-plastic elisebenza ukududula i-timing chain ukuthi iqine kahle.
Nalokho kuyadinga ukushintshwa ngoba uma sekuthambe ispring ngaphakathi imoto isingayeqisa itiming iduma bese igobisa ama valve.
Kanti itiming belt nayo iyanwebeka okuyibeka engcupheni yokunqamuka imoto ihamba bese kuba esifanayo. Nephethroli filter kubalulekile ukuthi uyishintshe ukuze kungezi uphethroli noma udizili onezibhidi kuma-injector abese ayacinana afe. I-air cleaner ehogela umoya oqhamuka ngaphandle kubalulekile ukuthi uyishintshe ngoba uma ike yafaka uthuli kuma injector ayafa bese idle upetrol ngendlela engafanele idonse kanzima.
Ama-spark plug nawo ayadinga ukushintshwa ngoba uma imoto iqhubeka ihamba luyasha ikapisi lawo agcine engasakwazi ukubasa kahle.
Ngiyazi bengikha phezulu kodwa usuyabona ukuthi ukusevisa awenzeli omunye omuntu kodwa wenzela imoto yakho ukuthi ibe nempilo enhle ikuphathe kahle.
Kulawo magama sengithi asiwuvale okwanamhlanje ubhonethi sicishe ama hazard ethu sibuyele emgwaqweni siyishayel izule. Ayingadli amagalani siqhubeke nokuhlonipha nokubuswa yiyo yonke imithetho yezokushayela ekhonya kuleli zwe ukuze thina nezimoto zethu sihlangane sisaphila nangesonto elizayo.
Uma ufuna siyiqhube le ndaba ngena ekhasini lethu kuFacebook othi Igedlela Lami with Sthembiso Shangase. Yimi owenu nali ikheli ngezansi hazardiso@ gmail.com
KUBALULEKILE ukuthi imoto uyisevise njalo ngesikhathi esifanele ukuze injini izohlale isisemweni esihle Isithombe: REUTERS